कोरोनाले कामबिहीन बनेका टूरगाइडहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ : अध्यक्ष टूर्गान - Arthakoartha.com
कोरोनाले कामबिहीन बनेका टूरगाइडहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ : अध्यक्ष टूर्गान
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिट–१९) को कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ। त्यससँगै यो क्षेत्रमा आवद्ध हजारौ संख्याका टूरगाइड बेरोजगार बन्नु परेको छ । पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा टूरगाईहरुको अवस्था र उनीहरुका मागबारे टुरिष्ट गाईड एसोसिएसन अफ नेपाल (टूगार्न) का अध्यक्ष केदार तामाङ्गसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
अहिले टूरगाईडहरुको अवस्था कस्तो छ ?
विश्वभर नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरि पर्यटन प्रर्वद्धनमा टूरगाईडहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसलाई कसैले नर्कान सक्दैन । त्यसो हुँदा पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले हाम्रा मागलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
मागहरु चाहि के–के छन् ?
ति हजारौ टूरगाईडहरु अहिले बेरोजगार छन् । उनीहरु र उनका परिवारको दैनिकी असहज बन्दै गएको छ । यो असहज अवस्थामा सरकारले अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले हाम्रा जुन मागहरु छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
केही समय अघि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र अझ भनौ तपाईहरुको समस्यालाई कतिको सम्बोधन गरेको पाउनुभयो ?
कोरोनाको यो संकटले टूरगाईडहरु अझै केही वर्ष बेरोजगार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । यो अवस्थामा उनीहरु पलायन हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
कोरोनाको महामारी तत्काल अन्तः हुने सम्भावना छैन । त्यसले गर्दा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि मानिसहरु पहिलेको जस्तो तत्कालै भ्रमणमा निष्कन सक्ने अवस्था हुँदैन । अर्को तर्फ विश्वभरकै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चौपट छ । त्यसले मानिसलाई आर्थिक क्षती पु¥याएको छ । यसले पनि भ्रमणमा निष्कन पक्कै पनि केही असहज बनाउछ ।
पलायन विभिन्न किसिमले होला, केही देश छोडेर जालान वा कोही अन्य व्यापार, व्यवसायमा लाग्लान । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर पलायन हुने अवस्थामा बन्यो भने देशको लागि निकै घाटा हुन्छ ।
अन्तमा अरु केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
उद्योग निर्माण र पर्यटनको विकासमा श्रीलंका इच्छुक
मौद्रिक नीति यो साता पनि नआउने